Semalt Rivela Il Segreto Su आओ सोव्राक्रेकारेआई I Pulsanti CTA Con Queste5Parole
जब साइट copylogger.com आफ्नो eBook 'चुंबकीय हेडलाइन्स' को साथ बाहिर आयो, तिनीहरूले वेब प्रतिलिपि अधिकारको दुनियामा क्रान्तिकारी गरे। सामान्यतया बोल्दा, 'चुंबकीय हेडलाइन्स' ले कसरी 'क्लिक चारा' शीर्षक लेख्ने भन्ने शव्द लेखिएको थियो जुन यो शब्द देखा पर्नुभन्दा पहिले। म्याग्नेटिक हेडलाइन्सका लेखकहरूले पनि 'सूची' पहिले नै जान्नु अघि त्यो सामान्य स्थान शब्द पनि बन्यो।
यसैले हेडलाइनको साथ ट्राफिक तान्न प्रयोग गर्ने प्रविधिहरू यस ठाउँमा राम्रोसँग परिचित छन्, र यदि तपाईंले 'चुम्बकीय हेडलाइन्स' अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन भने तपाई अगाडि जानु पर्छ र त्यसो गर्नुपर्दछ। तपाईं आश्चर्यचकित हुन सक्नुहुन्छ, कसरी साइटका आगन्तुकहरू ग्राहकहरूमा रूपान्तरण हुन्छन् एक पटक तपाईंको ब्लग पोष्ट, विज्ञापन र अन्य अवतरण पृष्ठ खोल्दा।
एक्शन बटनमा कल गर्नुहोस् वा CTA हरू अवतरण पृष्ठ रूपान्तरणहरू र विवरणहरूका विषयहरूको इञ्जिन हुन्। त्यहाँ धेरै केसहरू छन् जहाँ केवल सीटीए बटनको रंग परिवर्तन गर्दा रूपान्तरण दरहरू द्रुत रूपमा बढाउन सक्दछ। र than भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण शब्दहरू छन्, कार्य गर्न कलको लागि प्रयोग गरिएको छ, यो एकदम निर्णायक छिटो नै।
यो कुरा मनमा राख्दै , Semalt डिजिटल सेवाहरूको विज्ञ निक Chaykovskiy बताउँछन्, कुन शब्दहरू मनोवैज्ञानिक एक CTA बटन सुपरचार्ज गर्न साबित भएका छन्।
पर्खनेले राम्रो कुरा पाउछ। त्यो सबै राम्रो र राम्रो छ, तर जब कसैलाई केहि खरीदको लागि आउँदछ, साइनअप, वा अन्यथा कार्यमा वसन्त, तपाईं तत्काल तृप्तिको लागि आधार मानवीय आवश्यकताको लागि अपील गर्न चाहनुहुन्छ। यसैकारण "तत्काल", "द्रुत" वा "अब" जस्ता शब्दहरूले CTA रूपान्तरण दर बढाउन मद्दत गर्दछ। त्यहाँ एमआरआई मस्तिष्क अध्ययनहरू छन् जुन यसलाई पनि पुष्टि गर्दछ।
मानिस नयाँ चीजहरूको आकर्षणले उत्साहित हुन्छन्। "केहि हुनेवाला छ, तर के? म यसलाई मिस गर्न चाहन्न!" यो उस्तै प्रकारको सोच हो जुन पोकर टेबलमा जुवाता घण्टा राख्छ, र दुर्व्यसनी पिउँछ र बिहानको बेलुकी घण्टामा ड्रगि। गर्दछ।
बेलायती सरकारको कोषबाट गरिएको अध्ययनले गरेको एउटा राम्रो अध्ययनले पत्ता लगाएको छ कि जब तपाई बिक्रीको प्रतिलिपिमा ग्राहकको नाम प्रयोग गर्नुहुन्छ, यसले मस्तिष्कको अनुपम प्रतिक्रियालाई प्रोत्साहित गर्दछ। होईन, सामान्य वेब विज्ञापनमा ग्राहकको नाम प्रयोग गर्न सम्भव छैन। अझै, दोस्रो व्यक्तिको सर्वनाम 'तपाइँ' को प्रयोग गरेर उहि पञ्च छ।
व्यक्तिहरू उनीहरूको कार्यको लागि कारणहरू लिन चाहन्छन्, र यदि तपाइँ कसैलाई सहयोगको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ भने उसले वा तपाइँले तपाइँलाई सोध्नुको कारण थाहा छ भने उनी तपाईंलाई बाध्य पार्ने बढी सम्भावना हुन्छ। एक सकारात्मक धारा द्वारा पछि शब्द 'किनभने' धेरै शक्ति छ। यसलाई वजन घटाउने उत्पादनको लागि सीटीए बटनको रूपमा विचार गर्नुहोस्: "किनभने तपाईं वजन घटाउन सक्नुहुन्छ" योसँग यसको राम्रो औंठी छ, हैन र?
Free. नि: शुल्क
यो एक को लगभग एक brainer। सबैजना निःशुल्क चीज मन पराउँछन् र केहि प्रस्ताव 'निःशुल्क' को रूप मा एक व्यक्तिको दिमाग को आवेगपूर्ण भाग को कम से कम प्रतिरोध को मार्ग हो। यद्यपि, धेरैजसो उपभोक्ताहरू समझदार भएका छन्। कसैलाई पनि मूर्ख बनाउन मनपराउँदैन, र अधिकांश व्यक्तिले CTA बटन क्लिक गर्नु अघि दुई पटक सोच्दछन् जुन यसमा 'नि: शुल्क' लेखिएको छ। त्यसैले हो, 'नि: शुल्क' रूपान्तरण गर्न सक्दछ, तर यो थोरै मात्र प्रयोग गर्न निश्चित गर्नुहोस् र केवल जब तपाईंसँग वास्तवमै केहि चीजहरू छन् जुन तपाईंसँग जोडिएको छैन।